आज शनिबार, कुन राशि हुनेहरुका लागि फलदायी ? – Upahar Khabar
आज शनिबार, कुन राशि हुनेहरुका लागि फलदायी ?
प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०७:०२ May 30, 2020
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) उद्योग तथा व्यापार व्यावसायमा समय प्रतिकुल रहेकोले घाटा सहनुपर्ला । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला दुख पाइनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकिको साथ नपाइने हुँदा मन खिन्न रहनेछ । मुद्दा मामिला तथा प्र्र्तिश्पर्धामा तपार्ईँको पक्षमा निर्णय नआउदा मानशिक तनाव बढ्नेछ । बिद्यामा गरीएको लगानीबाट सन्तोषजनक नतिजा आउनेछ । प्रयण सम्बन्धमा चिसोपन बढ्ने भएपनि अन्तत एक अर्कालाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
डब्ल्यूएचओ सँगका सबै सम्बन्ध तोडेको ट्रम्पको घोषणा
नेकपा भित्र एमसीसी विवाद, शनिबार बिहान ९ बजे सचिवलाय बैठक बस्दै